आइपिएलमा दिल्लीको पहिलो खेल आज, सन्दिप खेल्ने सम्भावना कति ? – WicketNepal
आइपिएलमा दिल्लीको पहिलो खेल आज, सन्दिप खेल्ने सम्भावना कति ?
Bipul Bhattrai, २०७५ चैत्र १०, आईतवार १५:१६
विकेटनेपाल – १० चैत्र, आइतवार
इन्डियन प्रिमियर लिग ( आइपिएल ) क्रिकेट अन्तर्गत आइतवार दुई खेलहरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा कोलकत्ता नाइट राईडर्सले घरेलु मैदानमा सन्राईजर्स हैदरावादको सामना गर्दा दोस्रो खेलमा मुम्बई इण्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सको सामना गर्नेछ।
दिनको दोस्रो खेलमा नेपाली स्टार लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सले प्रतियोगितामा आफ्नो पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। अन्तिम सिजन खराब प्रदर्शन गर्दै तालिकाको अन्तिम स्थानमा प्रतियोगिता टुंग्याएको दिल्लीका लागि यस सिजन सुखद सुरुवात गर्न मुम्बई इन्डियन्स बिरुद्ध जित आवश्यक रहने छ।
प्रतियोगिता इतिहासमा सर्वाधिक असफल टोली मानिएको दिल्लीलाई सर्वाधिक सफल टोली मध्येको एक मुम्बई इण्डियन्स बिरुद्ध जित हाँसिल गर्न सहज भने हुनेछैन। खेल नेपाली समय अनुसार राति ८:१५ बजेबाट मुम्बईको घरेलु मैदान वाङ्खडे मैदानमा सुरु हुनेछ।
सन्दिपले अन्तिम ११ मा स्थान बनाउने सम्भावना कति ?
अन्तिम सिजन प्रतियोगिताको अन्तिम ३ खेल खेल्दै ५ विकेट चट्काएका नेपाली गुग्लि ब्वाई सन्दिप लामिछानेलाई यस सिजन भने दिल्लीले थप मौका दिने आशा गरिएको छ। अघिल्लो सिजनको आइपिएल यता विश्वभरका टि-२० लिगमा सहभागी हुँदै आएका सन्दिपले भारतमा समेत धेरै क्रिकेट विश्लेषक र समर्थकको ध्यान तानेका छन्।
यी सबै अनुभवको बलमा यस सिजन दिल्लीले सन्दिपलाई सुरुवाती खेलमा नै मौका दिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपी टोलीमा अमित मिश्रा, राहुल तेवाटिया र अक्षर पटेल जस्ता अनुभवी भारतीय स्पिनर रहेकाले सन्दिपले अन्तिम ११ मा स्थान बनाउन सजिलो रहनेछैन।
यस्तै टोलीले आफ्नो अन्तिम ११ मा ४ बिदेशी खेलाडी राख्न पाउने नियम रहेकाले सन्दिपलाई अन्तिम ११ मा स्थान बनाउन अर्को चुनौती थपिएको छ। दिल्लीको टोलीमा सन्दिपसंगै कोलिन इन्ग्राम, कोलिन मुन्रो, क्रिस मोरिस, कागीसो रबाडा, ट्रेन्ट बोल्ट, शर्फ़ेन रुदर्फोर्ड र किमो पौल जस्ता बिदेशी खेलाडी रहेका छन्।
अपेक्षित अन्तिम ११ ( दिल्ली क्यापिट्ल्स ) : शिखर धवन, पृथ्वी शा:, श्रेयस अय्यर, कोलिन इन्ग्राम, रिसभ पन्त, शर्फ़ेन रुदर्फोर्ड, अक्षर पटेल, राहुल तेवाटिया/अमित मिश्रा, सन्दिप लामिछाने, आभेश खान, ट्रेन्ट बोल्ट
दिल्लीले उपाधि जित्नेमा सन्दिप आशावादी :
भारत प्रस्थान गर्नु अघि सन्दिपले कुराकानीका क्रममा आफु दिल्लीले उपाधी जित्नेमा बिश्वस्त रहेको बताएका थिए। सन्दिपले दिल्ली टिम राम्रो बनेको र यो सिजन उपाधि जित्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे-
“जुन तरिकाले टिम बनेको छ र खेलाडीहरुले अभ्यासमा मेहनत गरिरहेका छन् र कागजमा पनि हाम्रो टिम राम्रो देखिएको छ त्यसैले आशावादी छु यो पटक उपाधि जित्ने आशावादी छौँ ”